Translate sveti from Serbian to Burmese - MyMemory
Results for sveti translation from Serbian to Burmese
Sveti, koji ivi u pohvalama Izrailjevim!
ကိုယ်တော်မူကား၊ ဣသရေလအမျိုးသားတို့ ချီးမွမ်းရာ၌ ကျိန်းဝပ်လျက် သန့်ရှင်းခြင်းရှိတော်မူ၏။
Potoci vesele grad Boji, sveti stan Vinjeg.
I ovo rekavi dunu, i reèe im: Primite Duh Sveti.
Jer æe vas Sveti Duh nauèiti u onaj èas ta treba reæi.
အကြောင်းမူကား၊ ထိုခဏခြင်းတွင် အဘယ်သို့ပြောရမည်ကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အကြံ ပေးမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။
Pozdravljaju vas svi sveti,aosobito koji su iz doma Æesarevog.
ငါနှင့်အတူရှိသော ညီအစ်ကိုမှစ၍ သန့်ရှင်းသော သူအပေါင်းတို့သည် သင်တို့ကို နှုတ်ဆက်ကြ၏။ ကဲသာဘုရင်၏ နန်းတော်၌နေသော သန့်ရှင်းသူတို့သည် အထူးသဖြင့် နှုတ်ဆက်ကြ၏။
Pozdravite jedan drugog celivom svetim. Pozdravljaju vas svi sveti.
အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက် သန့်ရှင်းသော နမ်းခြင်းနှင့် နှုတ်ဆက်ကြလော့။
သန့်ရှင်းသူတို့ကို ပြင်ဆင်ခြင်းအလိုငှါ၊ ထိုသခင်သည် လူအချို့တို့ကို တမန်တော်အရာ၌၎င်း၊ အချို့ကို ပရောဖက်အရာ၌၎င်း၊ အချို့ကို သာသနာပြုအရာ၌၎င်း၊ အချို့တို့ကို သင်းအုပ်ဆရာ၊ ဆရာအရာ၌၎င်း၊ ခန့်ထားတော်မူ၏။
S kim æete me dakle izjednaèiti da bih bio kao on? veli Sveti.
သို့ဖြစ်၍၊ ငါ့ကို အဘယ်သို့ ပုံပြရအံ့နည်း။ ငါသည် အဘယ်သူနှင့် တူရအံ့နည်းဟု သန့်ရှင်းသော ဘုရားမေးတော်မူ၏။
Zato posveæujte se, i budite sveti, jer sam ja Gospod Bog va.
A svedoèi nam i Duh Sveti; jer kao to je napred kazano:
Zato, kao to govori Duh Sveti: Danas ako glas Njegov èujete,
ထိုကြောင့်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် မိန့်တော်မူသည်ကား၊ ယနေ့တွင် သင်တို့သည် ဗျာဒိတ် တော်အသံကို ကြားလျက်ရှိသည် ဖြစ်၍၊
Tada odvede Ga djavo u sveti grad i postavi Ga navrh crkve;
ထိုအခါ မာရ်နတ်သည် ယေရှုကို သန့်ရှင်းသောမြို့တော်သို့ဆောင်သွား၍ ဗိမာန်တော်၏အထွဋ်၌ တင်ထားပြီးလျှင်၊
Prvi dan neka vam bude sabor sveti, nikakav posao ropski ne radite.
ပဌမနေ့၌ ဓမ္မစည်းဝေးခြင်းကို ပြုရမည်။ လောကီအလုပ်ကို မလုပ်ရ။
Prvi dan neka bude sabor sveti, nijedan posao ropski nemojte raditi.
Prvi dan neka je sabor sveti; nikakav posao ropski ne radite.
Nego da pamtite i tvorite sve zapovesti moje, i budete sveti Bogu svom.
ငါပညတ်သမျှတို့ကို အောက်မေ့၍ ကျင့်သဖြင့်၊ သင်တို့ ဘုရားသခင်အဘို့ သန့်ရှင်းမည်အကြောင်း ထိုသို့ ပြုရမည်။
Svetenike æu njegove obuæi u spasenje, i sveti æe se njegovi radovati.
သူ၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်တို့ကို ကယ်တင်ခြင်း တန်ဆာကို ဆင်စေသဖြင့်၊ သူ၌သန့်ရှင်း သူတို့သည် ရွှင်လန်းသော သီချင်းကို ရွှင်လန်းစွာ ဆိုရကြလိမ့်မည်။
ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ အရှင်ထာဝရဘုရားသည် တရားစီရင်ခြင်းအားဖြင့် ချီးမြှောက်ခြင်းသို့ ရောက်တော် မူလိမ့်မည်။ သန့်ရှင်းတော်မူသော ဘုရားသခင်သည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းအားဖြင့်၊ သန့်ရှင်းခြင်းရှိတော်မူလိမ့်မည်။
A dok jo Petar govorae ove reèi, sidje Duh Sveti na sve koji sluahu reè.
ထိုစကားကို မြွက်ဆိုစဉ်၊ နှုတ်ကပတ်တရား တော်ကို ကြားနာရသော သူအပေါင်းတို့အပေါ်သို့ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သက်ရောက်တော်မူ၏။
tum mujh par bharosa kar sakti ho (Hindi>English)vejledninger (Danish>Esperanto)acetonu (Czech>Italian)14 hajar ko english (Hindi>English)イチゴどう (Japanese>English)referente operativo (Italian>English)sa oras nakasulat sa taas (Tagalog>English)materi pembelajaran (Indonesian>English)diabetes (English>Bulgarian)kung ayaw mo hindi kita pipilitin (Tagalog>English)terputus tali (Malay>English)involuntary euthanasia (English>Tagalog)waakzaam (Dutch>German)floyd (English>Portuguese)kam bolne wale (Hindi>English)panitia bahasa inggeris (Malay>English)buullu colour (Tamil>English)regeringskabinetten (Dutch>French)vis et honor (Latin>Russian)e tu (Maori>English)ano ang kasalungat ng sari sari (Tagalog>English)why are you behaving like this (English>Hindi)qui te ista cura liberarent (Latin>English)kya keh raha hai (Hindi>English)1 se 6000 (Hindi>English)